सधै उत्कृष्ट टिमले नै जित्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन : मोड्रिक – Khel Dainik
सधै उत्कृष्ट टिमले नै जित्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन : मोड्रिक
श्रावण १, २०७५ | (PostaComment)
एजेन्सी । फ्रान्ससँग रसिया विश्वकपको फाइनलमा ४–२ ले पराजित भएपछि क्रोएशियाका कप्तान तथा गोल्डेन बल बिजेता लुका मोड्रिकले रेफ्रीमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
पोष्ट म्याच इन्टरभ्यूका बेला उनले भनेका थिए, “हामीले जे कुरा पनि हासिल गर्यौं त्यसका लागि हामी गर्व महशुस गर्दैछौं । तर यो साँचो हो कि फाइनलको पराजय सहज हुँदैन । हामी अन्तिमसम्म लड्यौ र हार मानेनौं । हामीले ४–१ को स्कोर हुँदा पनि हार मानेनौं । तर हामी कसैलाई दोष दिन सक्दैनौं ।”
फाइनलमा हारे तापनि फिफा विश्वकप २०१८ को उत्कृष्ट खेलाडी बन्दै स्टार मिडफिल्डर मोड्रिकले गोल्डेन बल अवार्ड भने जित्न सफल भएका थिए ।
यसबारे सोधिएको प्रश्नमा मोड्रिक भन्छन्, “स्वभाविक हो कि गोल्डेन बल जितेर म खुशी छु तर म विश्वकपको उपाधि जित्न मन पराउँछु । हामी आउने केहि दिनमा यो ठूलो उपलब्धीका लागि खुशीयाली मनाउने छौं । तर यो तितो यथार्थ पनि हो कि हामी निराश पनि छौं ।”
“I think we deserved more in the final but that’s football. We should be proud for never having surrendered”https://t.co/y3KjAEkTYH
— AS English (@English_AS) July 15, 2018
भारको सहयोगमा फ्रान्सलाई फिफा विश्वकप २०१८ को फाइनलमा पेनाल्टी दिएकोमा मोड्रिकले रेफ्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनी भन्छन्, “मैले पेनाल्टी देखेको थिएन । तर इभान पेरिसिचले मलाई आफूले यो नियतवश नगरेको बताएका थिए । अन्य खेलाडीहरुले पनि त्यसै भनिरहेका थिए ।
पहिलो गोलमा फल थिएन । हामी फ्रान्समाथि हावी थियौं, त्यतिबेला नै यो पेनाल्टी आइपुग्यो । यो अवस्थामा तपाईंलाई काउन्टर अट्याकका लागि लड्नु र काम गर्नुपर्छ । तर जे भयो हामी त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं ।”
के क्रोएशिया विश्वकपमा यो उपलब्धी भन्दा बढी हकदार थियो ? भन्ने प्रश्नमा मोड्रिक भन्छन्, “मलाई लाग्छ फाइनलमा हामी बढी हकदार थियौं तर यो फुटबल हो । हामीले गर्व महशुस गर्नुपर्छ कि विपक्षीविरुद्ध हामी झुकेनौं ।”
त्यस्तै उनले सन् २०२२ मा हुने कतार विश्वकपका बारेमा बोल्न हतार नगर्ने बताए । रुसमा हात पारेको सफलताबारे बोल्दै यी क्रोएशियन कप्तान अगाडी भन्छन्, “हामीले आफ्नो टाउको उठाएर मैदान छाडेका छौं । हामी निकै नजिक थियौं र यो सहज हुँदैन । हामी धेरै डिजर्भ गर्छौं तर बेस्ट टिमले सधै जित्दैन । त्यसैले फुटबल विश्व कै उत्कृष्ट खेल हो । यद्यपि जब तपाईं हार्नुहुन्छ, त्यो सहज हुँदैन ।”
← युभेन्ट्सले तत्काल रोनाल्डोको आधी ट्रान्सफर फी तिर्ने आगामी सिजन पनि पिएसजी रहनेछु : एम्बाप्पे →
पौडी टोली कोरिया जाने श्रावण १, २०७५
स्वर्ण र कीर्तिमानधारी खेलाडी पुरस्कृत श्रावण १, २०७५
विश्वकपको दोस्रो चरणको ड्र आज, को–को बन्लान् नेपालको प्रतिद्वन्द्वी ? श्रावण १, २०७५
प्रदेश ५ टिम च्याम्पियन श्रावण १, २०७५
प्रदेश १ लिग : बेलबारीका सुब्बा बने प्रतियोगिता कै ‘बेस्ट’ श्रावण १, २०७५
कुङफुमा नेपाललाई ५ स्वर्ण श्रावण १, २०७५